Daawo: Qasaaraha ka dhashay qaraxii xalay boosaaso ka dhacay iyo daacish oo mas’uuliyaddiisa sheegatay | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Qasaaraha ka dhashay qaraxii xalay boosaaso ka dhacay iyo daacish oo mas’uuliyaddiisa sheegatay
Wednesday May 24, 2017 - 3:57 under Somali News by Tifaftiraha K24
Kooxda isku magacowday qilaafada islaamka ee daacish ama loo yaqaab ISIS ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxii ismiidaaminta ahaay ee xalay ka dhacay bar koontarool oo ku taala magaalada boosaaso.
Wakaaladda wararka u baahisa kooxda daacish ee acmaaq lagu magacaabo ayaa waxaa lagu qoray in weerarka uu fuliyay mid kamid ah dagaalyahanada daacish ee soomalia ka dagaalama weerarkaasi waxaa uu bartilmaameedkiisu ahaay fadhiisimo ay ciidamada puntland ku leeyihiin bartamaha magaalada boosaaso.
Inta la xaqiijiyay weerarka waxaa ku naf weysay 5 ruux oo uu ku jiro ninkii is qarxiyay waxaana dadka dhintay laba kamid ah ay ahaayeen askar halka labada kale ay shacab ahaayeen halka dhaawaca uu gaaraayo 11 ruux oo shacab iyo askar isugu jirta .
Qaar kamid ah dadka qaba dhaawacyada ayaa la sheegay in dhaawacooda uu halis yahay waxaana hada lagu dabiibaya goobaha caafimaad ee magaalada boosaaso.
Taliyaha Booliiska Gobolka Bari C/xakiim Yuusuf Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay geerida shan ruux iyo dhaawaca 11 kale waxaana taliyuhu sheegay in qaraxa uu ku geeriyooday hal askari inta kalana ay shacab yihiin.